Nchịkọta nkwakọ ngwaahịa nwere ọgụgụ isi maka ngwaahịa ọgwụ na ahụ ike | Toptag
Obi abụọ adịghị ya na coronavirus abụrụla nsogbu zuru ụwa ọnụ. Iji zere ibute ọrịa, ndị mmadụ amatala banyere ịdị ọcha nke onwe ha, nke mere ka oke mmụba n'ọchịchọ maka ngwaahịa ịdị ọcha nke onwe na ọnwa ole na ole gara aga. N'ihi ezughi oke, ngwaahịa adịgboroja na ngwaahịa dị ala na-agbasa ngwa ngwa n'ahịa, nke na-eme ka ndị mmadụ malite ịghọta nchekwa nke ngwaahịa ịdị ọcha.
Ndị ahịa kwesịrị ịma ihe ọmụma ngwaahịa ndị a tupu ịzụta:
1) Olee ebe o si bia? (mba Onye si)
2) Olee mgbe emere ya? (were oge / adị ndụ)
3) Gịnị bụ ọrụ ndị ahụ? (Ọkọlọtọ ngwaahịa)
4) Ọ dị mma? (Ngwaahịa na-abụghị nke adịgboroja)
N'ikwu okwu n'ozuzu, ọ ga-ewe ogologo oge iji nyochaa ozi a, teknụzụ RFID na-enyekwa azịza zuru oke iji dozie nsogbu ndị a.
Sdị nwere ike iji RFID dekọọ usoro ọnụọgụ bara uru nke ngwaahịa sitere n'ichepụta ahịa. N'ezie, RFID siri ike ịme adịgboroja. Ndị ahịa nwere ike iji ekwentị ha mata ihe ọmụma ngwaahịa na usoro. E jiri ya na teknụzụ ndị ọzọ dịka koodu QR na mbipụta mgbochi adịgboroja, RFID na-enye nchekwa dị elu karị, yana usoro nkwenye ahụ dị mfe ma na-aga n'ihu. Na mkpokọta, RFID na-ekwe nkwa nchekwa nke ngwaahịa na data.
Ndị mmadụ nwere ike ịjụ ọnụ nke itinye ego na RFID. Maka ngwaahịa dị ọnụ ala, ịgbakwunye ego ole na ole na ọnụahịa nwere ike ịbụ nnukwu nsogbu. Mana n'eziokwu, a na-eji teknụzụ RFID eme ihe na ụlọ ọrụ ndị na-ere ahịa, na e nwere ọtụtụ ikpe na ọmụmụ ihe gosipụtara uru nke RFID gosipụtara, ọkachasị na ụlọ ọrụ na-ebu ngwa ngwa ngwa ngwa. N'ụzọ doro anya, uru ndị a na-enweta na ọnụọgụ bara uru mgbe ha nakweere RFID (nchekwa ngwaahịa, ọhụụ ngwa ngwa, njikwa ngwa ahịa, na ahụmịhe ndị ahịa) gafere ọnụ ahịa ahụ, teknụzụ RFID ga-abụrịrị teknụzụ na-ewu ewu na ahịa ngwaahịa / ahụike.
Cheta, nchekwa na ahụike dị oke ọnụ.
Malite na Machị 2020, Cinda IOT kwadoro ZeroTech IOT iji nye RFID ihe nkwakọ ngwaahịa mara mma na usoro nyocha maka ihe nkpuchi ahụike.
N'ime oru a, onye na-eme RFID tag Cinda IoT emebela ọtụtụ ihe nkwakọ ngwaahịa RFID maka ihe nkpuchi ahụike, enwere ike itinye ya na usoro nkwakọ ngwaahịa site na ndị nrụpụta ihe mkpuchi ahụike. Nke ka mkpa bụ na imewe nkwakọ ngwaahịa na-emebi emebi ma a ga-ebibi ya ozugbo emepere ya.
"Mgbe anyị chepụta smart nkwakọ, anyị na-eji oge dị ukwuu na-elekwasị anya na ngwaahịa nchekwa."
Maazị Huang kwuru, onye isi njikwa Cinda IOT Marketing Center. Dabere na mkpa azụmaahịa, ndị na-emepụta ihe nkpuchi nwere ike ịhọrọ iji nkwakọ ngwaahịa mara mma na mkpuchi ọgwụ ọ bụla ma ọ bụ igbe ọ bụla. Ozugbo etinyere ngwaahịa nkpuchi na mkpado RFID, ọrụ azụmahịa niile gụnyere nkwakọ ngwaahịa, njem, ntinye akwụkwọ na ụzọ ọpụpụ ruo ire, yana ọbụlagodi omume ndị ahịa nwere ike soro ma dekọọ site na iji ngwa RFID na sistemụ.
"Obi dị m ezigbo ụtọ iji sistemụ nsuso RFID anyị ma DragonSpace na-akwado ọrụ a."
Henry Lau, onye isi oche ZeroTech kwuru, sị: “A na-eji igwe ojii igwe ojii anyị ugbu a ndị ama ama ama ama na ụlọ ọrụ na-ere ahịa iji jikwaa data ngwaahịa. Ekwenyela na nkwụsi ike na ọsọ n'elu ikpo okwu.
"Site n'echiche nke teknụzụ, ọ dịghị ihe dị iche na nsuso ọgwụ na ịsa ahụ uwe, mana nke mbụ nwere isi, ọkachasị na ọnọdụ ugbu a."
Na igwe ojii igwe ojii nke DragonSpace, ndị ahịa kwesịrị i consumersomi nkwakọ ngwaahịa RFID nke ihe mkpuchi ahụike na ekwentị ha, yana akụkọ ihe mere eme na ozi ngwaahịa ga-egosipụta. N'agbanyeghị oge ma ọ bụ ebe ọ bụla, ndị ahịa nwere ike ịchọpụta ugbu a ma mkpuchi mkpuchi ọ bụ ngwaahịa adịgboroja n'ime otu sekọnd.